Faahfaahin weerar isqarxin oo argagixisadu ku qaaday Muqdisho oo hadda la soo afjaray - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Faahfaahin weerar isqarxin oo argagixisadu ku qaaday Muqdisho oo hadda la soo afjaray
Faahfaahin weerar isqarxin oo argagixisadu ku qaaday wasaarada arimaha gudaha iyo tan amniga oo isku hal guri ah kuna dhow taalada Sayidka ahna goobtii hore loo oran jirey Ooto ooto ama halkii ay ka soo bixi jireen mootooyinka galbin jirey madaxwynihii qaranka burburey Siyad Barre aya hadda la soo afjaray.
Sida dad ka agdhow wasaarada ay sheegeen argagixisada ayaa sidii caadiga ahayd gaari ku qarxisay afaafka wasaarada kuna dishey ilaalada wasaarada iyo dadkale oo masaakiina.
Kadibna waxa la sheegay in naftii halige ka tirsan dhiigmiiratada uu isku qarxiyay gudaha wasaarada. Goobta oo ciidan ku filan weerarada fuleynimo ay ka ag dhowyihiin ayaa markiiba ku baxay.
Waxa wararkii u dambeeyay sheegayaan in sadex argagixiso halkii lagu diley la soona badbaadiyay shaqaalihii wasaarada iyo shacabkey u adeegaysay.
Dawlada ayaa inta badan lagu eedeeyaa inayna waxba ku qaadan weerarada fuleynimo ee argagixisadu shacabka ku xasuuqayso ayadoo isla si u isticmaalaan weerarada ay fuliyaan ama isla huteelkii ay haddana qarxiyaan.
Argagixisada ayaa waxa warka siiya isla shaqaalaha ka shaqeeya wasaaradaha iyo huteelada.
Ma jirto qasaare dhab ah oo dawladu ka soo saartey inkastoo hadda la xaqiijay dhimashada Maxamed Axmed Ilkacase oo xoghaye u ahaa wasiirkii hore ee arimaha gudaha C/raxmaan Odawa xilligii Xasan Sheekh oo isaga laftiisa la sheegayo inuu dhaawacmey.